XAALADAHA STARS. Charlotte of Cambridge, KU SOO DHAWAADA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE XAALADAHA CAADADA. Charlotte oo ka socda Cambridge, l
XAALADAHA STARS. Charlotte oo ka socda Cambridge, l
TELES RELAY 31 August 2019
Haddii aad la kulanto Charlotte Diana Elizabeth ee Cambridge, wac Her Royal Highness Princess Charlotte ee Cambridge. Da'da sanadka 4 Tan iyo 2 May 2019, gabadhii Amiir William iyo Kate Middleton waxaa loogu yiqiin "Mignonnette" aabihiis, iyo Faransiis, fadlan! Walaalkiis ka weyn waa George, walaalkiis ka yar waa Louis. Fursadaha ay ku heli karto carshiga waa mid khafiif ah: iyadu waxay horey u ahayd kaalinta afaraad oo keliya marka loo eego isku xigxiga, oo darajadeeduna mar labaad hoos ayey u dhici doontaa isla marka walaalkeed ka weyn uu carruur leeyahay.
Baabtiiskii ee kaniisad la mid ah Diana
Dhacdada, 5 Luulyo 2015, runtii si dhab ah ayaa loo daawaday! Marka hore maxaa yeelay waxay ahayd kaniisadda St. Magdalene Church ee Sandringham, halkaas oo Diana lafteeda lagu baabtiisay 1961. Laakiin sidoo kale maxaa yeelay, maalintaas, waxaan ogaanay shanti awowgood: Laura Fellowes, ina adeer Diana, iyo sidoo kale James Meade iyo Thomas van Straubenzee, oo ah saaxiibo dhow oo amiirka ah. Kuwan waxaa lagu daray Sophie Carter, oo u dhow Kate, iyo inaadeerkeeda Adam Middleton.
Horeyba saddex-luqadle ah!
Waxay ku hadashaa Ingiriisiga, dabcan, laakiin sidoo kale Isbaanish, iyadoo ay ugu mahadcelineyso Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo, oo ka socota magaalada Palencia, Spain. Iyada oo aan ilaawin Faransiis, waxay ku bartay aasaaska dugsiga.
Waligaa caqli badan malaha
Oo waxay leedahay lammaane naxdin leh! Charlotte iyo George waxay leeyihiin farqi sanad iyo badh ah wayna jecel yihiin sameynta afar boqol oo istaroog wada jir ah ! Bishii Luulyo 2018, intii lagu jiray qarnigii dhexe ee Ciidanka Cirka, sawirrada Princess iyo walaalkeed oo ku ciyaarayay tartanka grimace ugu quruxda badan (in ay gacmaheeda ku guuleysatay!) ayaa aaday dunida oo dhan!
Oo iyana way caddeysaa! Marna ma seegto fursad ay indhaha uga dhigto mid jilicsan yoolalka, ha ahaato hooyadeed ama sawir qaadayaasha. 23 Abril 2018, markay u tagtay hooyada inay la kulanto walaalkeed Louis, waxay xitaa u soo bandhigtay iyaga daqiiqado dheer. Hagaag, runtii, waxay ahayd kaliya 3 sano!
Afartii sano, Charlotte waxay muujisay inay horey u leedahay dabeecad muqadas ah! Oo ay ku jiraan maalinta baabtiiskii Prince Louis. Ka bixitaankii masjidka boqornimada ee Palais Saint-James, ayay amiirku sawirrayaasha ka dhaadhiciyeen in aan la soo dhaweynaynin ... "Maya, ma imaanaysid!", Ayay u sheegtay. Daqiiqad hore ayaa shucuur ah!
Sida hooyadeed Kate Middleton, Charlotte waxay jeceshahay inay sawiro qaadato. Waxay sidoo kale dhiirigelisay ayeeyadeed awoowe: sida Elizabeth II, boqoraddu waxay u kortaa sidii horyaley.
Iskuul aad u xiisa badan (oo qaali ah!)
Kadib Kindergarten Willcocks Dugsi Xannaanada, oo ku taal aagga kor u kaca ee Kensington, Charlotte wuxuu ku laaban doonaa dugsiga Thomas Battersea, kaas oo uu isna dhigto George. Barnaamijka: koorsooyinka ku baxa luqadaha qalaad, tiyaatar, dheri. Laakiin waxaas oo dhan oo raaxo leh waxay leeyihiin qiimo: 22 000 € sanadka.
Wuxuu ku dhashay xiddig nasiib badan? Sida biyaha hurda ...
Wuxuu ku dhashay 2 May 2015, 8 h 34, London, Charlotte waa Taurus kor u kaca kansarka. Xiddiguhu maxay nooga sheegaan shaqsiyaddiisa iyo mustaqbalkiisa?
Dabeecaddiisa: hodan ku ah is burinaya. In kasta oo ay ka walaacsan tahay inay ka farxiso iyo dibloomaasiga, way ogtahay waqtiyada bixitaanka. Dayaxu wuxuu ku yaal Libra wuxuu muujiyaa nooc dabiici ah oo cabira. Laakiin Uranus xagga saadaasha waxay soo jeedineysaa wax ka soo horjeedda: ha ku qanacnaanin waxaad rabto. Iyadu waa sida biyo oo kale, Oo xanaaqiisu waa u yar yahay sidii cabsi badan.
Noloshiisa shucuurta: isku-duubnaanta iyo madax-bannaanida. Charlotte waxay u rajeyneysaa wax walba iyo wixii kasoo horjeedda. Waxay jeclaan laheyd labadaba jacayl deggan iyo nolol jacayl cusub ... Waqti gaaban, damacyada is-khilaafsan ee ay adag tahay in la qanco.
Ujeedadiisu waa: dhibaatooyinka iyo damaca xanuunka leh. Muhiimadda koowaad, Charlotte qasab ma ahan inay xukunto. Waxay umuuqataa in mustaqbalkiisu la kulmi doonaan dhibaatooyin iyo damac xanuun badan. Waxay u egtahay in Charlotte uu si ula kac ah u garaacayay ololka Diana. Ugu dambeyntiina, waxay xor u tahay inay kala doorato bina aadminimada, cilmiga deegaanka iyo farshaxanka.
Sannado 4 ah, Darajadiisa Boqortooyadu wali waxay xaq u leedahay inay ogolaato daqiiqado yar oo nasasho ah!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/royautes/heritiers-de-stars-charlotte-de-cambridge-l-histoire-d-une-princesse-charmeuse-1014887
PHOTOS. Rachel Legrain-Trapani: waa kuwee ragga nolosheeda?
Royal snub: Meghan Markle wuxuu "murmi karaa madax xanuun" si looga fogaado "isboorti"